လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေကို လူငယ်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်လဲ??? -
#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p0831#31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p-10+00:003131+00:00x31 26မနက်31မနက်-31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p10+00:003131+00:00x312021ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +000007100710မနက်အင်္ဂါ=1153#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p+00:0010#2021#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p0831#/31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p-10+00:003131+00:00x31#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p+00:0010#
#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p0831#31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p-10+00:003131+00:00x31 26မနက်31မနက်-31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p10+00:003131+00:00x312021ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +000007100710မနက်အင်္ဂါ=1154#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p+00:0010#အောက်တိုဘာ#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p0831#/31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p-10+00:003131+00:00x31#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p+00:0010#
#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p0831#31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p-10+00:003131+00:00x31 26မနက်31မနက်-31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p10+00:003131+00:00x312021ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +000007100710မနက်အင်္ဂါ=1155#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p+00:0010#26#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p0831#/31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p-10+00:003131+00:00x31#!31ဂါ, 26 Oct 2021 10:07:08 +0000p+00:0010#
လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေကို လူငယ်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်လဲ???
အခုလို Covid 19 ကပ်ရောဂါကြီးအပြင် အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းတွေပိတ်၊ အလုပ်တွေပိတ်ပြီး မနက်ဖြန်တွေဟာမသေချာတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူငယ်တွေရဲ့ဘ၀ဟာပိုမိုခက်ခဲလာပြီး အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း အထီးကျန်လာကာ မိမိကိုယ်ကိုအလိုမကျတာတွေပါ ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။
(…ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဘယ်အရာကိုမဆို စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တာဟာ ပုံမှန်ပါပဲနော်။…)
လူငယ်များသိရှိနားလည်ထားရမှာက ယခုလိုစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေခံစားနေရတာဟာ မိမိတစ်ယောက်ထဲခံစားနေရတာမဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လူငယ်များအားလုံးခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး စိုးရိမ်စရာအခြေအနေများနဲ့ကြုံတွေ့ရလို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေရခြင်းဟာ ပုံမှန်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရှိနားလည်ထားဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။
ရေရှည်ကြုံတွေ့ရမယ့်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေများနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ – ကိုယ်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ ဘာ မှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုပြီး ၂မျိုးခွဲထားတာကောင်းပါတယ်။ ယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာများဟာ ကိုယ်တစ်ခုခုအင်အားစိုက်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားမယ့်အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်လက်ခံထားရပါမယ်။
ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား အားလပ်သွားတဲ့အချိန်များမှာ အကျိုးရှိတဲ့သုတ၊ရသစာပေများဖတ်တာ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုခုကို Online Class တက်ပြီးလေ့လာတာ၊ အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်များကြည့်ပြီး အပန်းဖြေတာအပြင် အင်္ဂလိပ်စာပါတွဲလေ့လာတာ (မသိတဲ့စကားလုံး၊ အသုံးအနှုန်းများတွေ့လျှင် ချက်ချင်းရှာပြီးလေ့လာတာမျိုး)၊ အရင်ကသင်ချင်ပေမယ့် အချိန်မရှိလို့မသင်လိုက်ရတဲ့ တူရိယာတီးမှုတ်နည်းတွေသင်တာ၊ မိမိအိမ်မှာအလွယ်တကူလုပ်လို့ရမယ့်ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်တာ စတဲ့အကျိုးရှိတာတွေပြုလုပ်ရင်း အာရုံလွှဲထားသင့်ပါတယ်။
အခုလိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနဲ့ ပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်မရဘဲ Social Distancing လုပ်နေရတဲ့အချိန်များမှာ Social Media Platform တွေက အပေါင်းအသင်းများနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲရှိနေစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ရင်းနှီးတဲ့အပေါင်းအသင်းများနဲ့ Video Call ရတဲ့ Platform တွေကနေ စကားပြောတာ၊ Chat Group ဖွဲ့ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အထီးကျန်နေတယ်လို့ခံစားရခြင်းကို အနည်းနဲ့အများတော့လျော့နည်းစေမှာပါ။
မိမိခံစားနေရတာတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်မသိချင်ယောင်ဆောင်တာ၊ ဖုံးကွယ်ထားတာမျိုးမလုပ်ဘဲ ခံစားစရာရှိတာတွေကို ခံစားလိုက်ပါ။ စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတာ၊ ဝမ်းနည်းနေတာတွေကို မြိုသိပ်ထားပါက တမြေ့မြေ့နဲ့အချိန်ကြာကြာပိုပြီးခံစားနေရမှာဖြစ်လို့ ဝမ်းနည်းစရာရှိရင်ဝမ်းနည်းလိုက်ပါ၊ ငိုစရာရှိရင်ငိုလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကို မြိုသိပ်မထားဘဲရင်ဆိုင်လိုက်ရင် ခဏတာတော့ဝမ်းနည်းရပေမယ့် မြိုသိပ်ထားတာထက်စာရင် မြန်မြန်ပိုပြီးစိတ်သက်သာရာရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာမဆို အကောင်းနဲ့အဆိုးအမြဲဒွန်တွဲနေတတ်လို့ အဆိုးတွေအများကြီးထဲကအကောင်းကို မြင်တတ်အောင်ကြည့်ပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အခုလိုအရင်ကထက်အားလပ်ချိန်တွေပိုများလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ မိမိကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုသလို ကိုယ့်ဘ၀အတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အရာလေးတွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကိုဖြတ်သန်းကာ အရာအားလုံးပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီကို တူတူပြန်လည်ချီတက်ကြရအောင်ပါ။
🤍𝗛elping 𝗢ur 𝗣eople 𝗘veryday